Koowheel 2nd ọgbọ e-skateboard mbụ ịnya - Jomo Technology Co., Ltd
Koowheel 2nd ọgbọ e-skateboard mbụ ịnya
Hi ~ N'ihi Koowheel 2 nd ọgbọ electric skateboard Kooboard bụ nke mbụ electric skateboard ná ndụ m, na m na-adịkarịghị na-emefu ego ịzụta dị otú ahụ dị oké ọnụ toy (Na mgbakwunye, zụtara nzọ bike na "ezi ihe kpatara" ...) otú ahụ ka m ọkụ n'obi na-aga ka ogige. Na m bụ nnọọ na-egbu mgbu na arụchaala agbara nso ule, ka e mesịrị m kọwaa ihe mere na ọ bụ na-egbu mgbu.
Tupu ị na-agụ akụkọ, mbụ ịkekọrịta skateboard si data maka akwụkwọ.
Ngụkọta ibu koowheel electric skateboard bụ 61.9KG na arọ ahụ 58.5KG + ahụ nchedo ngwaọrụ 1.6KG + na àjà ihe ọṅụṅụ-fechaa na-agba ọsọ ụkwụ 0.2KG + 960ml Water + 1KG mobile ekwentị igodo na irighiri 0.6KG.
The njem mbụ
Ụnyaahụ ehihie na ihu igwe dị nnọọ na-ekpo ọkụ, chọrọ na-skateboard na Riverside Park, ma, n'ihi na ezinụlọ nri abalị oge kwa nso, na-aga na nso mkpọda na-agbalị ya. Mgbe chi jiri, na Park nwere ukwuu ndị mmadụ, ya mere, osooso na deceleration dị nnọọ ugboro ugboro, na banyere 5:30 pm, m na-eti site na ezinụlọ m, a were 55 nkeji.
Mgbe nri abalị, ọ bụghị nye olileanya ije ọzọ.
Na mgbe nwere nri abalị na ezinụlọ m ma laghachi na Riverside Park na 9 elekere, oge a na pedal naanị na sporadik ọgba ọsọ, ya mere, egwu ome osooso maka a mgbe, More leisurely ụzọ na-enwe, a nọkwa awa abụọ na ọkara .
On mgbede, echefuwo 10.68KM.
Elekere itoolu na mgbede, ileghara 28.76KM ọzọ.
Slope agbanwe obere mgbe nkezi elu bụ 26 mita.
The n'elu data na-dere site APP "Geo Tracker", na satellite n'ọnọdu ka kpọmkwem mode. The bike uzo banyere 2.3 km, na fọrọ nke nta niile korota pavement, naanị 50 mita bụ nnọọ bumpy na taịl (abụọ ebe ngụkọta nke 50 mita). M ga-nọrọ banyere 3 awa na 14 nkeji (fọrọ nke nta niile guzo na skateboarding ~ _ ~ "), n'ezie, ọ bụ nnọọ ihe na-egbu mgbu na ahụmahụ.
Nke a oge m ridded 39,44 km na zuru ebubo batrị ~ Ị dịghị ahụ ya na-ezighị ezi, na onye na batrị, ọtụtụ oge m chọrọ inye ruo-aga n'ụlọ na mgbe nwalee ọzọ ụbọchị ọzọ, nke a bụ n'ezie ezi ndiiche ndụ ... ... ... ... (na mgbe na-agba ọsọ batrị, aka metụrụ batrị mesịrị bụrụ oyi, na moto naanị a Micro-okpomọkụ, n'ezie Good ~), m na-eche ma ọ bụrụ na m akwụsịghị na-aga, ihe agbara kwesịrị elu, ma ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere a na osisi, mgbe ahụ, i nwere ike na-agbalị. Ọ ga-ogologo oge karịa ka m na-eguzo na skateboard .
N'oge dum nhazi, na m nwere ọtụtụ mgbanwe ná ọsọ na breeki (my osooso na deceleration na ọsọ nso biko rụtụ aka na n'elu picture), otú ahụ ka m iche na ọ ga-20KM agbara nso na ịgba (dị ka ahụmahụ, Nsukka na-emekarị na mbe ọsọ plus mgbe nile ọsọ tụọ si a mara mma data, otú ike kwere). Ma n'ihi na nke a echiche nke mere na m nwere ụfọdụ adịghị anabata (m na-eche na a ga na mberede ike anya, nwere jide a 7.8 n'arọ electric skateboard azụ n'ụlọ).
Ma n'ihi na nke a na-ezighị ezi echiche, otú ahụ ka m ridded ruo 12 elekere, na ọkụ eletrik n'ezie iwesa si. (Nke maara data ga-e dere mgbanwe ...... .. m n'ezie efu), Ọ bụ 20km ngwa ngwa karịa m na-eme atụmatụ na-agba 20km. (akụkọ a na-agwa anyị, na-echeta ihe ike ngosi ọkụ n'ihu na-akpọ electric skateboard, na adịghị iche na bụla emeputa ga-tricky ").
Anọ laps n'ime ha bụ na-anọdụ ala na skateboard (play ka kart mgbe ị na ike gwụrụ, ọ bụ n'ezie oké)
Na elekere itoolu ọsọ ịgba nke banyere 26.8KM.
Na nkenke, mgbe a ule, ndị na-esonụ nwere ike enen:
The ihe agbara nke electric skateboard dị nnọọ mma, Nsukka nye data dị mgbanwe.
Motor na batrị àgwà dị mma, ezigbo ịnya fọrọ nke nta dịghị superheat.
The wheel ga ujo ụkwụ na brick ụzọ.
Ọ bụrụ na e 12mm gravel n'okpuru wheel, wiil ga-awụlikwa elu.
Ọ bụrụ na e 5mm gravel, adịghị emetụta akara.
Brek bụ nkọ na mwute, biko adịghị asọ kwa ike, na-eme na-elekwasị anya gbanwere tupu oge eruo.
Osooso arụmọrụ dịkwa mma, ga-enwe na-akpali akpali mgbe akpọchi.
Ọ nwere ezi ime mgbanwe na ike ike n'okporo ụzọ, mgbanwe nke osisi dị nnọọ ka wiil Kaakwa.
The n'elu agbara na ọsọ ule na-rụrụ enweghị akpọchi, na m ga Ị kpọghee ekwt ịhụ ezigbo ọsọ nke na osisi oge ọzọ.
Post oge: Sep-29-2017